Okumnandi, okumemayo, okonwabileyo "omnyama ukusuka" kwi-Via Gyra "kuye kwahlala kuyintandokazi kuluntu, kungakhathaliseki ukuba kaninzi kangakanani ukwakhiwa kweqela eliphumelele kakhulu lase-Ukraine.
Ebudeni bakhe kwakukho ukuphazamiseka nokuphazamiseka, ukuphelelwa lithemba nokungaqiniseki, kodwa uhlale evulekile entsha kwaye ngoku uyazi imfihlelo yolonwabo.
Ngokufihlakeleyo kumama, ngowama-2000, umfundi oneminyaka eyi-18 ubudala waseKhmelnytsky Pedagogical School waba yindoda ye "Via Gry". Umsebenzi oqaqambileyo akazange amise ngisho nokuzalwa kwonyana wakhe - uNadia Granovskaya wabuyela kwindawo apho uGig kuphela inyanga. Kwaye wayesekhathele waza washiya "i-Via Gyra". Kwaye kwakukho uNowadia omtsha, uNadia Mayher, umphathi weprogram ye-TV ethi "Incredible Love Stories" kwisitrato se-STB - kunye neenwele zakhe ezinqamlekileyo, kwiingubo eziqinileyo. Namhlanje ibhokhwe yesondo ibulela kwakhona ngothando. Kwaye kwakhona uNadia omtsha! Ngokwemvelo, ehamba ngeengcamango aze aphile ngokuvisisana naye kunye nehlabathi.
Iminyaka emithathu ohlala kuyo ngokwakho - wanyamekela unyana wakhe, wasebenza njengombukeli weTV, wenza i-vocal vocal, isiNgesi neSpeyin. Ngoku unesidyuli sobomi kwakhona. Yintoni omele uyilahle ngenxa yexesha lokulahleka kwexesha?
N.M. Ndinexesha elaneleyo lezinto zonke, kuba ixesha lam lingekho - kukho isigqi sangaphakathi, ndidla ngokuphulaphula intliziyo yam. Kwaye ndikhetha isigqi ehluke kakhulu, into eyona nto kukuzivelela. Ngokukhawuleza ukuba uqaphele ngokugqithiseleyo okanye ukungathandabuzeki ngokweqile, kuyafaneleka ukuyeka ukucinga. Nangona ndivuma amaqela ahlukeneyo ebomini bam, kulungile kum.
N.M. Ewe, ndikhala! Kwaye kwedwa, kunye nomntu "e-vest." Ubume ngokumangalisa ukulungiselela umntu - kuyimfuneko ukukhala kubini nakwabesetyhini. Emva kwakho konke, iinyembezi ziyingxaki yeengxaki ezininzi.
Ngesinye isikhathi, waphathwa kwaye waphumelela ngokusukela kwi-aerophobia evela kumgqirha. Emva koovulindlela, ngaba unokumcebisa umntu onengxaki yengqondo ukuba aphendule kwiingcali okanye aphinde azilungiselele?
N.M. Njengomthetho, akunakwenzeka ukuba uziqonde. Andiboni nantoni na into engahlawulelwayo kwinto yokuba abantu bajika kwi-psychologist. Ukusuka kwesikrasi kubalulekile ukuba uphume nangayiphi indlela. Ihlabathi lethu lomntu lingenabuhlungu: nokuba uyinto "yemifuno", okanye uthatha uxanduva lobomi bakho, ukuhlakulela iintlobo ezahlukeneyo, ukubeka imithetho yakho. Yiyiphi indlela oya kuyo ngumbuzo wesibini. Into ephambili kukuba akukho maxhoba, ukugcina ukuthula okukhulu. Umoya uwonakaliswe, ubonakaliswe ngobunzima bokwakhiwa. Ndikholelwe, yonke into ehamba phambili, kufuneka uvumeleke ukuba ufaneleke ngokufanelekileyo.
Uvume ukuba ungumntu ongenamathandabuzo wokuzithemba nokungaqiniseki. Ngaba ucinga ukuba ezi mpawu zikunceda ukuba ube ngcono?
N.M. Akukho nanye kwezi zinto ezifaka isandla ekuphuhliseni. Le yinto yokuqala endikufuneka ndiyilahle ukuze iqhube phambili, kwaye ivela kwingcinga eqhubekayo yecala. Kwaye kweli lizwe zininzi. Yingakho asikwazi ukukhusela amalungelo ethu njengabemi belizwe lethu, ininzi lethu iipiliti.
Ubomi boluntu buye buguqula njani? Ngaba ube ngumntu ohlukile?
N.M. Kungenzeka ukuba iphendulwe ukuba ingazange ixesensitivity kumanga nohanahaniso. Yonke into inexabiso layo, kwaye andisilungele ngenxa yobuqhetseba, ukuhlawula imali yam inkululeko yam inkululeko kunye nenhlalakahle yonyana wam. Umhlophe nomnyama, kwaye kuya kuba njalo - kuxhomekeke kwizinto ozikhethayo.
Ekwindla iqoqo lakho lokuqala leengoma ezibalulekileyo "Ukukhangwa kwesikhashana" kwaphuma.
Sitshele indlela le mibongo eyayizalwa ngayo, esekelwe, njengoko uyazi, kwiinyani zangempela.
N.M. Ndaqala ukubhala iimbongo zokuqala emva kokuba unyana wam wazalelwa ngo-2002. Emva koko ndandicinezelekile, abanye abadlali ababhaliweyo, abanobunzima, bangena kule ncwadi. Kwaye ke ikhefu: ukuzulazula, ixesha lokuzilahleka. Kwaye ngo-2006, xa kwakukho ixesha elininzi, ndaphinda ndiqala ukubhala - izinto ezininzi ezahlukileyo, ndandifuna ukubhala ngesandla, ukufaka. Ngoku ndiyazi ukuba kungekudala okanye kamva ndiza kuqala ukubhala kuba ndifumene kwelinye ihlabathi apho ndiziva ndikhululekile, apho ndihlala ekhaya, kwisitya sam, apho ndifumana iphepha elicocekileyo lamaphepha, kwaye ke ndingaba ngaphezu ephosakeleyo. Yonke yangaphandle, yonke idlule, ukuhamba komphefumlo kunye nokuwa kwayo. Ndiyabhala ngokungafaniyo, kubaluleke kakhulu, ukukhanya okucacileyo, ukuvumela ihlabathi langaphandle kwi-prism yombono wam, ukubonakala kunye namaphupha aqaqambileyo, kwaye akukho nto engacingi.
Le ncwadi iboniswe ngeefoto zakho ezifanelekileyo. Kutheni unqume ukuba "ubonise yonke into"?
N.M. Iifoto zinjenge-frank njengoko ndandizivumela, ngenxa yokuba iinkondlo zam zingekho phantsi. Le ncwadi yimi: inhle kwaye iyatshitshisa, iyingozi nakwiindawo ezivela kuThixo. Olu luhlu lwam lobomi, ukukhangela i-adrenaline.
Abanye bagxekisa imbongi yakho. Ewe, kwaye "nge-Gro" abantu abaninzi banokubheka njengento enobudenge. Ngaba kukulimaza?
N.M. Andikhathaleli oko bakubizayo. Abantu abafanele bagwetywe, kwaye bakhubeke ngakumbi kunye nento yokubonisa umntu. Kwaye ndinomdla kuninzi. Kwaye ke yintoni? Andizami ukukholisa. Kule ncwadi kukho imizila elandelayo: Kwaye emva kwekhefu phezu kokumangalisa kwakho, awuyi kuqaphela ukuhamba kwam; Ndijonge kwisibuko ngendoda kwaye ndicinga ukuba unjani uhlobo lomfaki. Udla ukucinga ngaloo ndlela? Xa ndibhale le nkondlo, andizange ndimelele indoda ethile, nangona kunjalo kuphila kweli hlabathi. Andiyonto "engabonakaliyo" ngabantu, ndiyakhathalela wonke umntu, kuba nangona i-scum ayikho ngaphandle kwesizathu. Kodwa ngokwabo ndinomtya ophakamileyo kakhulu ukuvuma ebomini bam, kwaye oku akuxhomekeke kubutyebi bendalo. Abo basetyhini abanoyikayo ngokwabo bayavuma, kwaye andingenalo.
Intliziyo yakho ayikhululekile?
N.M. Intliziyo yam ikhululekile ngonaphakade. Ikhukhunyiswa ngothando, ikhupha kwaye ikholelwa kwimimangaliso. Kodwa ndiyathanda ukuchitha ixesha ndedwa, ndizinikezele ekuzalweni kweengcamango ezahlukeneyo, ukuba ndizibandakanye. Kwaye andithinteli abantu abanomdla.
Yintoni, indoda yakho? Umntu osisilumko, oqulunqwe ngokucacileyo kunye nehlabathi elithe tye.
N.M. Andikuthetha ngokubonakalisa ngokugqibeleleyo kwezi mpawu, kodwa kubalulekile ukuba kubonakale.
Uthe watsho ukuba awusoze watshata ... Chaza, nceda.
N.M. Umtshato ungumsebenzi. Ukuba uyamthanda ngokwenene umntu, mthembise, ukuba uyilwanyana efanelekileyo kuThixo, ngoko awuyidingi imbali. Ngaba kuyimfuneko ukutshintsha ubudlelwane, ukulungelelanisa nomnye umntu? Unako konke ukuzivumela ngokwakho, ngokoqobo. Kubalulekile kuphela ukuba ngaba kuya kuba luncedo kule miqolo emibini, nokuba uya kubangela umonakalo okanye intlungu. Unokuzama ukufumana ulungelelaniso, kodwa ngaba kuyimfuneko, ukuba awufuni ukuva? Ngothando entliziyweni, kwizinto ezintle, unokuxolela kakhulu kwaye uvumele ezininzi, emva kokuba bonke behamba ngendlela yabo yokukhula kwangaphakathi. Omnye uzimisela ukuba kulula ukuba adlale ngemithetho yomnye. Kwaye kwenzeka ngokuqhelekileyo ukuba umntu odibeneyo endleleni yethu yinto yokuphoqa phambili, kodwa yedwa. Ngaphambi kokuba kukho indoda, baninzi abahambahamba nabo.
Ucinga njani-ngubani omele azuze imali kwintsapho?
N.M. Ngokomntu, mna, kunjalo, kufuneka ndifumane. Andikho umntu onokumthemba, kwaye ngaphandle koko, ndiziva ndikhululekile. Andixhomekeke kunoma ubani, andinayo nayiphi na into nabani na. Andikwazi ukulawulwa, ndiyathanda kakhulu.
Ngaba uthanda ukwenza imisebenzi yasekhaya, udale utyhafile, uphakamise ekhitshini?
N.M. Hayi, kuphela kubakhethiweyo.
Mhlawumbi utshathise ubumnandi bonyana ka-Igor oneminyaka elixhenxe ubudala. Si xelele ngako.
N.M. Uya kwiklasi yesibini, kwisikolo sabucala kunye ne-French bias. Ukuba ndingekho, unyana unomama okanye nomntwana. Igor ngumntwana onomdla kakhulu, unomusa, unomdla, unombulelo, unomdla. Ndiva ukuba siya kuba ngabahlobo abakhulu.
Ungathanda ukumphakamisa njani?
N.M. Ndifuna ukuba afunde ukuqonda yonke imizuzu yobomi. Yonke into ayizinzileyo kwaye iphela. Ukuze adideke phantsi kwayo nayiphi na imeko, wayebahlonela abasetyhini, abaxabisekileyo nabathandekayo, wanikela konke kwaye akazisoli nto, kodwa wajonga ngenyameko umgibe onobuqili. Wadibana naye lowo iNkosi yamdala yona.
Yintoni inoyolo ekuqondeni kwakho?
N.M. Okokuqala, yimeko yolonwabo olujikelezayo. Sincedana omnye nomnye uyavuya. Emva kwakho konke, kunye nomntu ongenanto-ongu-passer-by unokufumana uvuyo, ukumomotheka ngokunyanisekileyo, nothando.
Xa ujabule, njengendalo yonke ihleli ngaphakathi kuwe, kwaye wabelana ngamaqhekeza?
N.M. Ulonwaba kufuneka utyunjwe, ukwabelana ngawo.
Mhlawumbi awuyi kuchitha ubomi bakho bonke becula ngo "Via Gra" - ulutsha aluhlali ngonaphakade. Yintoni ongathanda ukuyenza emva kwe-Via Gra? Sebenza? Uhlala kwiziqithi? Khulisa iklabishi, njengoko umbusi waseRoma wenza, eshiya itrone?
N.M. Ulutsha luhlala ngonaphakade! Mhlawumbi uya kukhula iklabishi, kwaye mna, mhlawumbi, ndiya kwenza into endiyenzayo - yenza. Kwaye ukuba kungenjalo "kwi-Via Gra", ngoko kubhukuda. Ndiyabulela kwimibono ezalwe kum, kubantu abancedisayo ukuzifumana kwinto entsha, ukungabi nantoni, ekupheleni, rhoqo xa ndivula kwakhona kwakhona. Kwaye ndiya kwenza ntoni kusasa, kuphela yena owaziyo.
Ezilishumi zeemvumi ezingcono
UDemi Moore: i-Biography
Yintoni eyenza iimvakalelo zengqondo kubafazi
I-almond pie eneerspberries
I-cottage cheese mini casseroles kunye nobisi olunamanzi obisiweyo
Inwaba Yomndeni Elula
I-Recipe elula yePasika: amaqanda ase-Scotch othosiweyo
Yintoni enokuyinika umfana ngoFebruwari 23